न्गुगी वा थ्योङ्गो केन्याका विश्व प्रसिद्ध लेखक तथा मार्क्सवादी चिन्तक हुन् । उपन्यास, लघु कथा , नाटक, लेखनिबन्ध र कवितामा कलम चलाएका न्गुगीका रचनाहरू ६० भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएका छन् । भाषा संस्कृति और राष्ट्रिय अस्मिता (१९९९) र औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति (१९९९) शीर्षकमा उनका दुईओटा पुस्तक हिन्दीमा प्रकाशित छन र उनका थुप्रै फुटकर रचनाहरू नेपालीमा अनुवाद भएर प्रकाशित भएका छन् । युसी इरविनमा तुलनात्मक साहित्यका विशिष्ट प्रोफेसर न्गुगी थुप्रै पुरस्कार र ११ मानार्थ विद्यावारिधिबाट सम्मानित छन् । न्गुगी आफूलाई “भाषा योद्धा” का रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । आफ्नो मातृभाषा गियुकुलगायत अन्य मातृ भाषाहरूको अधिकार र मान्यताका लागि उनले लामो लड़ाइँ लडेका छन् । भर्खरै उनले 'एलएआरबी र एसिआर क्रिएटिव राइटिङ लाइफटाइम एचिव्मेन्ट अवार्ड' नामको प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त गरेका छन् । सोही अवसरमा हङ्गेरीकी लेखक तथा सम्पादक नन्दा दिस्सौले ‘लस एन्जेल्स रिभ्यू अफ बुक्स’ का लागि लिएको लामो अन्तर्वार्ता हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।
नन्दा दिस्सौ : सानै छँदा आफू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रसिद्ध लेखक हौँला र आफ्ना कथाहरू ६० ओटा भाषामा अनुवाद होलान् भनेर तपाईंले सोच्नुभएको थियो ?
न्गुगी वा थ्योङ्गो : अहँ, कहिल्यै पनि यसरी सोचिन । यतिसम्म कि आफू लेखक बनौँला भनेर पनि सोचिन । शिक्षा क्षेत्रमा एकपल्ट हातमा आएको अवसरलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा नै कठिन थियो । उपलब्ध केही स्कुल तथा कलेजमा ठाउँका लागि गरिने प्रतिस्पर्धा डरलाग्दो थियो । प्राथमिक स्कुलदेखि कलेजसम्म, हरेक दुई वर्षमा टर्मिनल परीक्षा हुन्थ्यो । यो मौका गुम्यो भने गयो, फेरि अर्को मौकाको टुङ्गो थिएन । कारण जेसुकै होस्, तपाईँ एकपल्ट ट्रेनबाट बाहिर निस्कनुभयो भने फेरि त्यो ट्रेन समात्ने कुरै छैन । मैले मेरो संस्मरण द इन्टरप्रिटर हाउसमा भनेझैँ म पढाइलाई निरन्तरता दिन चाहन्थेँ । जीवनमा पहिलोपल्ट पुस्तकालयमा प्रवेश गर्दा एक दिन संसारभरिका सबै किताब पढेर सक्छु भन्ने मेरो आकाङ्क्षा थियो । मेरो यथार्थले त्यो आकाङ्क्षारूपी पखेटालाई बाँधेर राखेको भए पनि पढ्ने इच्छा अझै मरेको छैन ।
नन्दा दिस्सौ : अहिले आएर लेखकहरूको बीचमा तपाईँ आफ्नो लेखन-भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
न्गुगी वा थ्योङ्गो : म भाषायोद्धा भएको छु, म ती सबै मान्छेहरूमाझ सामेल हुन चाहन्छु, जो हेपिएका भाषाका लागि लडिरहेका छन् । आफूले निर्माण गरेको कुनै पनि भाषा त्यस समुदायका लागि सिमान्त हुँदैन । भाषा सङ्गीतवाद्ययन्त्रहरूका झैं हुन्छ, विश्वमा एकथरी मात्रै वाद्ययन्त्रहरू हुन्छन् ,अथवा कुनै विशेष आवाजमा सबै गायकले गाउन सक्छन् भनेर तपाईं भन्न सक्नुहुन्न ।
न्गुगी वा थ्योङ्गो : संस्मरणले मलाई आफूलाई व्यक्त गर्न सघाउँछ । मैले यसलाई भन्ने गर्छु, “ओइ, म अझै बाँचेको छु” । अफ्रिकी भाषाहरूप्रतिको मेरो विश्वास यथावत छ, जुनसुकै साहित्यिक माध्यमबाट मैले सक्दो प्रत्याक्रमण गर्नुछ । कहिलेकाहिँ म आशै नगरेको सफलता प्राप्त गर्छु । मैले गिकुयु भाषामा लोकशैलीमा लेखेको एउटा कथा ४० ओटा अफ्रिकी भाषालगायत ६१ भाषामा अनुवाद भएको छ । यसलाई “इटुइका रिया मुरुङ्गार” (दि अपराइट रिभोलुसन : अर ह्वाइ हुमन्स वाक अपराइट) भनिएको छ । म निकै उत्साहित भएको छु, किन भने यस किसिमको परियोजनाका पछाडि 'जलादा प्रकाशन परियोजना' सित आबद्ध युवाहरूको पान-अफ्रिकी समूह छ । उनीहरू प्रधान सम्पादक मोसेज किलोलोमातहत काम गरिरहेका छन् ।